आरक्षण नीतिकै उपहास- विविधा - कान्तिपुर समाचार
आरक्षण नीतिकै उपहास
संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकका प्रावधान हुबहु पारित भए ‘पहुँचवाला’ खस–आर्य समुदायले ६८.५ प्रतिशत सिटमा लाभ पाउँछ ।
श्रावण २५, २०७५ रक्षाराम हरिजन
काठमाडौँ — के आरक्षण प्रणाली असमावेशिताकै निरन्तरताको साधन बन्दैछ ? राज्यले समावेशीका नाममा असमावेशिताको खाडल बढाउँदैछ ? राज्यका नीति र नियतले यस्तै प्रश्न उब्जाएका छन् ।सबै जात, जाति, क्षेत्र, वर्ग, सम्प्रदाय, लिंगका जनतालाई राज्य सञ्चालनका सबै निकायमा समान सहभागी गराउनु समावेशिताको प्रमुख उद्देश्य हो ।
कर्मचारीतन्त्रलाई समानुपातिक समावेशी बनाउने हो भने न्यून प्रतिनिधित्व भएका र सदियौंदेखि बहिस्करणमा परेका समुदायको क्षतिपूर्तिसहित आरक्षण व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ सदियौंदेखि राज्यमा एकाधिकार, पहुँच र प्रभुत्व भएका समुदायलाई आरक्षण र विशेषाधिकार दिनेगरी आरक्षण नीति बनाउने र लागू गर्ने क्रम छ ।
रमेश सुनामको अध्ययन अनुसार नेपालमा एकल जातीय लैंगिक वर्गले सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्रको ६२ प्रतिशत वर्चस्व कायम राख्दै आएको छ । निजामती सेवामा सबैभन्दा पछाडि पारिएको १३ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व २ प्रतिशतभन्दा कम छ ।
संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि खस–आर्यलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा आरक्षण दिने कानुन लागू भयो । त्यही कानुन बमोजिम समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमा सिट बाँडफाँड पनि भयो । त्यसको विरोध गरिए पनि सरकारले सुनेन ।
संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको प्रस्तावनामा निजामती सेवालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने भनिएको छ । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने कुरामा भने जोड दिइएन । विधेयकको दफा ८ को उपदफा (११) मा आर्थिक, सामाजिक रूपले पछाडि परेका भन्ने प्रावधानसमेत हटाई निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदको ४५ प्रतिशत छुट्याइयो । त्यही ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मान्दै त्यसको पनि आधा महिलाका लागिमात्र छुट्याइयो । महिलाबीच पनि ९ समूह कायम गरियो ।
विगतमा भएका आरक्षित क्षेत्रका ६ समूह महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा पनि थप गरी महिला र पुरुष दुवैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित समूहहरूलाई ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिलालाई मात्रै त्यसको पचास प्रतिशत (कुल संख्याको २२.५ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । बाँकी पचास प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी क्रमश: आदिवासी जनजाति ३२, मधेसी २६, दलित १२, विपन्न खस–आर्य १२, थारु ५, अपाङ्ग ५, पिछडिएको ४, मुस्लिम ३, पिछडा वर्गलाई १ प्रतिशत छुट्याइएको छ । महिलाका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी खर्स–आर्य ३०, आदिवासी जनजाति २२, मधेसी २०, दलित १०, थारु ५, अपाङ्ग ५, पिछडिएको ४, मुस्लिम ३, पिछडा वर्गलाई १ प्रतिशत छुट्याइएको छ । त्यसमा पनि पहिलो लाइनमा खस–आर्यलाई राखिएको छ, जबकि सबैभन्दा उत्पीडित, बहिस्कृत, उपेक्षित, सीमान्तकृत समुदाय दलित हो ।
विधेयक मस्यौदामा प्रस्तावित आरक्षणको प्रतिशत र त्यसको आधार स्पष्ट र न्यायसंगत देखिँदैन । पछाडि पारिएका समूहलाई नीति नियम निर्माणको माथिल्लो तहमा पुग्न सहज बनाउन आरक्षण व्यवस्था गर्ने गरिन्छ । बढुवामा विधेयकले आरक्षण व्यवस्था छैन । परिमार्जन बिनै विधेयक पारित भए समावेशिता प्रबद्र्धन हँुदैन ।
नीति र नियतमा बहिष्करण
विभेदपूर्ण नीति र सरकारको नियतले बहिस्करणमा परेका र सीमान्तकृत समुदाय झन् बहिष्कृत हुँदैछन् । नयाँ नियुक्तिमा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ६८ प्रतिशतभन्दा बढी लाभ एउटै समुदायलाई भइरहेको देखिन्छ । पछिल्लो अभ्यास र नयाँ विधेयकको प्रावधानले खस–आर्यलाई खुला ५५ प्रतिशत, विपन्न खस–आर्य समूहलाई २.७ प्रतिशत (समावेशीको २२.५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको १२ प्रतिशत) दिलाउने देखिन्छ । यस्तै खस–आर्य महिला समूहलाई ६.७५ प्रतिशत (महिला समावेशीको २२.५ प्रतिशतको ३० प्रतिशत), बाँकी अपांगता र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४.०५ प्रतिशत दिलाउँछ । यसरी एउटै समुदायले ६८.५ प्रतिशत लाभ पाउँछ ।
विज्ञापन गर्दा पटक–पटक गरी कुल संख्यालाई टुक्रा–टुक्रा पारिन्छ । यसले गर्दा समावेशीमा एकदम थोरै आउँछ, कहिले खुलामा सीमित हुन्छ । सुरुवाती दिनमा लोकसेवा आयोगले आरक्षणमार्फत गरिने पदपूर्तिको अन्तर्वार्ता तथा अन्तिम नतिजा खुलाभन्दा अगाडि निकाल्ने गथ्र्याे । अहिले खुलातर्फको नतिजा पहिले निकालिन्छ, जुन सकारात्मक हो ।
अध्ययनअनुसार समावेशी पद्धतिबाट जागिरमा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई दोस्रो दर्जाको ठान्दै उनीहरूको मनोबल गिराउन र वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर पार्न प्रशासनिक जालझेल गरिन्छ । प्रशासनिक अवसरलाई एउटै लिंग र जात समूहका व्यक्तिको पेवाजस्तै ठानिएकाले कर्मचारीतन्त्रमा समावेशिताको मुद्दा पेचिलो बनेको छ । आरक्षणको अस्वस्थ खेलले राज्य संरचना समावेशितातिर उन्मुख रहेको संकेत देखाउँदैन ।
विभिन्न समूहले भोगेको ऐतिहासिक विभेद, बहिस्करण र छुवाछूत र तिनको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था विश्लेषण गरी आरक्षण सम्बन्धी कानुन, नीति नियम बनाउन सक्नुपर्ने हो । ती समूहको जनसंख्या र राज्यमा पहुँचका आधारमा आरक्षण कोटा छुट्याउनुपर्ने हो । निजामती सेवामा विभिन्न समूहको प्रतिनिधित्वलाई ध्यानमा राखेर समावेशी सिद्धान्तको मर्म, विधि अनुरूप कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो । नत्र असमावेशिताको खाडल झन् बढ्नेछ ।
हरिजन थर्ड एलाइन्सका सञ्चार संयोजक हुन् ।
प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ०८:३३
राज्यले गरेको दमनबारे बोल्नेहरू मधेसमा भएका गैरन्यायिक हत्यामा पहाडी बनिदिन्छन्, दलितमाथि दलनमा सवर्ण पल्टिदिन्छन् ।
श्रावण ५, २०७५ रक्षाराम हरिजन
काठमाडौँ — मानव अधिकारलाई अनेक चस्मा लगाएर हेर्ने गरिन्छ । सवर्णका लागि एउटा मानव अधिकार, महिला, मधेसी, जनजाति, दलित लगायतका लागि अर्कै मानव अधिकार ! मधेस आन्दोलनमा भएको हत्या लगायतका घटनालाई समेत मानव अधिकारकर्मीले अलग–अलग दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको पाइन्छ ।
एक मानव अधिकार गोष्ठीमा प्रा. युवराज संग्रौलाले भनेका थिए, ‘मधेस आन्दोलनमा बल प्रयोग जायज थियो । प्रहरीले घुँडामा कसरी ताकेर हान्ने ? तल–माथि त भइहाल्छ ।’ के प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी घँुडा र टाउको पनि छुट्याउने दक्षता नभएको संयन्त्र हो ? ह्युमन राइट्स वाच र एमनेस्टी इन्टरनेसनलले आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग गरेको गलत प्रतिवदेन सार्वजनिक गरी राष्ट्रियतामाथि आघात पारेको संग्रौलाको जिकिर थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले आयोगकै प्रतिवेदनको प्रतिकूल हुनेगरी भारदहमा प्रहरीले कानुनसम्मत बल प्रयोग गरेको दाबी गरे । कौसीमा बसेका दिलिप साह र घरमा रहेकी चार वर्षीया चन्दन पटेलमाथि गोली हान्नु कसरी कानुनसम्मत बल प्रयोग थियो ?
आयोगको निष्पक्षतामा शंका
सप्तरीको मलेठमा २०७३ फागुन २३ गते सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट पाँच सर्वसाधारणको हत्या भयो । थुपै्र व्यक्ति घाइते भए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चार महिनापछि त्यस घटना सम्बन्धमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । तर आयोगको निष्पक्षता, कार्यक्षमता तथा प्रभावकारितामै प्रश्न उठ्नेगरी प्रतिवेदन आयो । प्रतिवेदनमा सुरक्षा फौजको गोलीबाट पाँचजना मारिएको, सुरक्षा फौजले घातक गोली चलाउँदा अँगाल्नुपर्ने प्रक्रिया पालना नगरेको, जथाभावी गोली चलाएको तथा नियन्त्रणमा लिइएको व्यक्तिलाई समेत गोली हानेको तथा कुटपिट गरेको तथ्य छ । तर निष्कर्षमा भने अत्यधिक बल प्रयोग भन्न नमिल्ने तर्क छ । यसरी तथ्य र निष्कर्ष फरक कसरी आउँछ ?
बल प्रयोगको तर्क
ह्युमन राइट्स् वाचको अध्ययन प्रतिवेदनले ‘प्रदर्शनकारी र रमितेमाथि प्रहरीले गरेको बलको असमानुपातिक प्रयोग तथा गैरन्यायिक हत्या लगायतका अनेक गम्भीर अपराधका पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध रहेको’ भन्दै विवेकहीन ढंगले र ठूलो मात्रामा शक्ति प्रयोग तुरुन्तै बन्द गर्न सरकार र सुरक्षाकर्मीलाई आग्रह गरेको थियो ।
एसियन ह्युमन राइट्स कमिसनले प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले प्रदर्शनकारीको ढुंगा हान्ने वा यस्तै प्रकारका सामान्य हिंसाविरुद्ध आवश्यकताभन्दा अधिक र विषम शक्ति प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आन्दोलनका क्रममा ४९ जनाको जीवनको अधिकार समाप्त भएको र कम्तीमा पनि ७ सय २९ जना नागरिक घाइते भएको विषयलाई सरकारी नजरले हेर्न खोजेको छ । सुरक्षाकर्मीबाट अधिक बल प्रयोग भएको देखाइए पनि प्रतिवेदनमा आन्दोलनकारीबाट प्रयोग भएका हतियारबाट पनि समान प्रकृतिका घटना र क्षति भएको तर्क छ ।
किन हुँदैन हत्याको अनुसन्धान ?
मधेस आन्दोलनको क्रममा २०७२ भदौ २९ गते रूपन्देहीको बेथरी हाटबजारमा प्रहरीको गोलीबाट चार वर्षीय चन्दन पटेल मारिएका थिए । उनको मृत्युबारे अनुसन्धान गर्न मृतकका बुबाले दिएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गरेको थिएन । त्यसपछि उनी अदालत पुगे । पुनरावेदन अदालत बुटवलले जाहेरी दर्ता गरी हत्याको अनुसन्धान गर्न सरकार र प्रहरीको नाममा २०७३ भदौ १ गते परमादेश जारी गर्‍यो । तर राज्यबाट जाहेरी दर्ता भएको छैन ।
त्यही प्रकृतिका पाँचभन्दा बढी घटनामा पुनरावेदन तथा सर्वाेच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान तहकिकात गर्न परमादेश जारी गरेको छ । तर राज्यका तर्फबाट अनुसन्धान गर्ने दायित्व बोकेका निकाय जाहेरी दर्ता गर्न तयार छैनन् । उनीहरूले अदालतको आदेशलाई समेत टेरपुच्छर लगाएका छैनन् । यो अदालतकै अपहेलना हो ।
चाहे शंकास्पद मृत्यु वा हत्या होस् वा प्रहरीको अत्यधिक बल प्रयोगबाट मारिएको होस्, ती घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नहुँदा पीडित परिवारले न्याय पाउन सक्दैन । दण्डहीनता बढ्छ । अदालतले अनुसन्धानका लागि आदेश दिँदासमेत जाहेरी दर्ता नगरिनु कानुनी शासनको उपहास हो । तसर्थ राज्यले शंकास्पद मृत्युबारे बेवास्ता गर्नु हुँदैन, सत्य–तथ्य खोज्नुपर्छ । यस्ता घटनामा अनुसन्धान नगरी कानुनी राज्यको स्थापनामा अवरोध खडा गर्दा राज्यप्रति अनास्था उब्जिन्छ । नागरिकले कानुनी शासनको अनुभूति गर्न राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
तराईमा गैरन्यायिक हत्याको शृंखला नौलो होइन । ‘तराईमा निरन्तर गैरन्यायिक हत्या’ प्रतिवेदनमा २०६७ पुसको मध्यदेखि २०७० भदौ मध्यसम्म छानबिन गरिएका १२ घटनामध्ये १० जना भिडन्तमा मारिएको प्रहरीको दाबी थियो । तर राज्यपक्षले ती बाह्रैवटा गैरन्यायिक हत्याका घटनाबारे कुनै जानकारी सार्वजनिक रूपमा दिएको छैन । मानव अधिकारकर्मी र पत्रकारले पीडित परिवारबाट त्यस्ता घटनाबारे जानकारी पाएको देखिन्छ ।
मधेस आन्दोलनका घटना छानबिन गर्न बनेको लाल आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको ७ महिना बितिसक्यो । लाल आयोगले ३ हजार २ सय ६४ उजुरीमा आधारित ७ सय ९ पृष्ठको प्रतिवेदन मंसिर २८ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेसम्म राज्य, मानव अधिकारकर्मी र विभिन्न संस्थाको बुझाइमा मतैक्यता आउन सक्दैन । आफूलाई मानव अधिकारवादी मान्ने संस्था र व्यक्तिहरूकै हेराइ, भनाइ र गराइमा पनि एकरूपता देखिँदैन । लामो समयदेखि राज्यको दमनको सिकार हुँदै आएका अल्पसंख्यक समुदायले बेहोरेको प्रणालीगत भेदभाव र हिंसाबारे उनीहरूका हेराइ, भनाइ र गराइमा भिन्नता टिठलाग्दो छ ।
सधैंजसो राज्यले गरेको दमन र दण्डहीनताबारे बोल्नेहरू मधेसमा भएका गैरन्यायिक हत्यामा पहाडी बनिदिन्छन्, दलितमाथि दलनमा चाहिँ सवर्ण पल्टिदिन्छन् । राज्यकै भाषामा वकालत गर्ने अधिकारकर्मीहरूले आफैं स्थलगत अध्ययन गरेको थाहा छैन । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको अवस्थामा हत्यालाई अनेक निहँु र तर्कका साथ जायज भन्न मिल्दैन ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता बोकेका मानव अधिकारकर्मी विभिन्न श्रेणीमा विभाजित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । संकुुचित, पूर्वाग्रही र श्रेणीबद्ध व्याख्या मानव अधिकारको मापदण्डभित्र पर्दैन । यसले त मानवलाई उँचनीचमा श्रेणीबद्ध गर्ने वर्णव्यवस्थालाई नै नयाँ रूपरंगमा निरन्तरता दिन्छ । मधेस र अन्य अल्पसंख्यकलाई अनेक होच्याउने ढंगले नामकरण गर्ने, त्यसको आधारमा दलनसँगै विभेद गर्ने राज्यको व्यवहारलाई नै बलियो बनाउँछ । राज्यका निकायले मात्रै होइन, मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले पनि नागरिक–नागरिकबीच विभेद र विभाजन नगरिकन हेर्ने कि ? सबै नागरिकलाई समान मानव ठान्दै उनीहरूमाथि जारी दलन, उत्पीडन र हिंसाविरुद्ध उभिने कि ?
हरिजन थर्ड एलायन्सका सञ्चार संयोजक हुन् ।
प्रकाशित : श्रावण ५, २०७५ ०७:४१
थप केही विविधाबाट
तातोपानी नाकाको तात्पर्य
माओको भँगेरा शैली
'बहादुर' नेपाली रक्सी पिएर मर्न डराउँदैनन्
बाँदर्नी मैयाको कथा
अपडेटः मंगलबार, १३ असोज, २०७७ । २१ : १७ बजे
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन : अनुहार फेर्ने कि कार्यशैली ?
राजाराम गौतम आश्विन १३, २०७७
घनश्याम भुसाल, केपी ओली सरकारका सम्भवतः सबैभन्दा आसलाग्दा नेता । नेकपाको वैचारिक राजनीतिमा प्रखर अभिव्यक्ति राख्न सक्ने उनी समाजवादको ‘डिस्कोर्स’ मा रमाउँछन् । कम्युनिस्ट पार्टी...
एसईई परीक्षाफल : सिकाइमा छलाङ कि ग्रेडको स्फीतीकरण
मेदिनबहादुर लामिछाने आश्विन १३, २०७७
२०७६ को एसईईको परिणामले शिक्षा जगत्मा तरङ्गै ल्यायो । ४.० जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या ९,३१९ रह्यो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनमा ९,२१३ ले बढी हो । २०७२ को...
आश्विन १३, २०७७
मुटुसम्बन्धी रोगका कारण संसारभरि हरेक वर्ष १ करोड ७९ लाख मानिसको मृत्यु हुन्छ । यो एक वर्षमा संसारभरि हुने मृत्युको ३१.५ प्रतिशत हो । यो तथ्यले मुटुको...
चिनियाँ आर्थिक प्रगतिको अन्तर्य
सञ्जय आचार्य आश्विन १३, २०७७
समकालीन विश्वमा चिनियाँ आर्थिक उपलब्धिहरूबारे निकै धेरै लेख भेटिए पनि चिनियाँ सफलतापछाडिका कारकहरूबारे निकै कम बौद्धिक विश्लेषण गरिएको पाइन्छ । नेपालमा स्थायी प्रकृतिको वामपन्थी सरकार छ...
पीसीआर परीक्षणको पीडा
सम्पादकीय आश्विन १३, २०७७
राजधानीको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कैयौं दिनयता कोरोना भाइरसको संक्रमण भए–नभएको पहिचानका लागि पीसीआर परीक्षण गराउन रातविरात लागेको भीड र उनीहरूले भोग्नुपरेको...
‘संयोगवश’ बाँचेकाहरूको क्रान्ति
सरिता तिवारी आश्विन १२, २०७७
यो ‘समाजवाद–उन्मुख’ भनिएको लोकतन्त्रमा कहिलेकाहीँ लाग्छ— यस्तो समाज जहाँ आत्मसम्मानले बाँच्ने हक ‘उच्च’ जातका अति सीमित पुरुष मात्रलाई छ, त्यहाँ कोही महिला भएरै पनि या...